SAWIRKA AAD MUUQAALKAN MOODDO AYAA SHEEGAYA QOFKA AAD TAHAY (Q.1) – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA SAWIRKA AAD MUUQAALKAN MOODDO AYAA SHEEGAYA QOFKA AAD TAHAY (Q.1)
SAWIRKA AAD MUUQAALKAN MOODDO AYAA SHEEGAYA QOFKA AAD TAHAY (Q.1)
Qof kasta oo laxaadka aragga qabaa waxa uu arkaa muuqaallo humaag ku jiro oo marka u horreysa ee uu eego maskaxdu sawirro kala duwan ka qaadato. Waaba sida kurtinkii, bahalka ula ekaaday Cigaal Shidaad, ama xiddigaha qolfoofka neefka Geela ah inoola ekaaday ee aynu u bixinnay awrka cirka.
Laakiin hadda arrinta cusubi waxa ay tahay xeeldheereyaasha oo sheegay in hadba sawirka uu muuqaalka humaaggu ku jiraa kula ekaanayaa in laga garanayo wax badan oo ku saabsan shakhsiyaddaada iyo qofka aad tahay. Qoraal xiise badnaa oo ay arrintan ka samaysay shabakadda ‘Tarbiya Dakiyah’ oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa soo qaadatay sawiro muuqaallo kala duwan laga qaadan karo, kaddibna qof kasta muuqaalka uu moodo ayaa ay u sheegaysaa shakhsiga uu yahay.
1. RahDad sawirkan la tusay badankoodi deymadii koowaad waxa ay fahmeen in uu yahay rah. Haddii aad ka mid tahay kuwaas raha moody waxa aad tahay qof furfuran. Waxa aad isku daydaa in aad noqoto qof qof run sheeg badan, in uu dadka kale si toos ah ula macaamilana jecel wax kasta oo dhaca. Dadka kale waxa ay kuu yaqaannaan ruux la isku hallayn karo oo kalsooni mudan. Hadalkaaga kuma badna duurxulka iyo in aad si dadban farriimo ugu gudbiso, sidaas dadku taladaada iyo aragtidaada waa ay qaataan.
2. FarasHaddii aad deymadii koowaadba muuqaalkan faras madaxii moodday, waxa aad tahay shakhsu mufakir ah. Maskaxdaadu waxa ay awood u leedahay lafagurka iyo goryfaynta arrimaha.
Ma tihid dadka sida fudud arrinta muuqaalkeeda duleed uun ku qaatay. Waxa leedahay dabeecad aad wax ku naqdiyo karto, waxa aanad doorbiddaa in mawqifka aad qaadanaysaa uu noqdo mid adiga kaa yimi. La soco…
Previous articleSomaliland oo lagu Amaanay Doorashooyinka ay u Jihaysatay.
Next articleNafaqada Iyo Caafimaadka Laga Helo Cabista Caanaha Geela.